Asan-dahalo :: Mpirahalahy maty voatifitry • AoRaha
Asan-dahalo Mpirahalahy maty voatifitry
Tsy tana ny ain’ireto mpirahalahy izay naratra vokatry ny fifampitifirana tamin’ny dahalo tany Ambalamandray-Ambondrona any Isandra. Namoy ny ainy tany amin’ny hôpitaly tany Fianarantsoa izy mirahalahy. Fantatra ihany koa fa nisy iray tamin’ ireo dahalo no maty rehefa nojeren’ny fokonolona.
“Nisy fanafihana tao amin’io tanàna io, nataon’ny dahalo maromaro nitondra basy. Nikasa haka omby am-polony izy ireo saingy nanohitra ny fokonolona. Nisy ny fifampitifirana naharitra ora maro. Naratra mafy ireo mpirahalahy, taorian’izay. Noentina tany amin’ny hôpitaly tany Fianarantsoa izy ireo”, hoy ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
Fantatra ihany koa fa tsy voafaritra ny momba ilay dahalo maty voatifitra. “Nandrasan’ny fokonolona iray andro teo Ambalamandray ny razan’ilay dahalo, saingy tsy nisy olona tonga nilaza ho havany dia nalevin’izy ireo ”, hoy kosa ny loharanom-baovao avy amin’ny zandarimaria any Fianarantsoa.
Fanaovantsoa nampidi-doza :: Lehilahy notsindronin’ny olona niantrany tamin’ny antsy